The Medical Vehicle, Gịnị Ha Chọrọ - Luanchuan - Orich Medical Equipment(Tianjin) Co., Ltd
Mobile ọgwụ usoro
Radiology Imaging usoro
Ị nọ ebe a : Home /News
The Medical Vehicle, Gịnị Ha Chọrọ - Luanchuan
Oge : 2019-04-03 Hits :
Kemgbe afọ ole na ole, ọzọ na ndị ọzọ mobile ọgwụ ugbo ala e si ORICH Medical Device na obodo, obodo nta, mines, na ókè-ala-... The zụrụ ahịa aghọwo ihe iche iche, dị ka ahụ ike na ndị ezinụlọ atụmatụ ọrụ, ụlọ ọgwụ, anụ ahụ ule emmepe, general lọjistik ngalaba, uhie cross, na ụlọ ọrụ ..., nwere dị iche iche mkpa na dị iche iche ọzọ. Naanị ndị dị mkpa ka dọkịta ugbo ala mara na ha bara uru.
Na Mee 2017, Luanchuan County nyekwara RMB 2 nde ndị ọzọ, na e kenyere Luanchuan People \_ 's Hospital na Luanchuan Traditional Medicine Hospital na jikotara aka wee ịzụta abụọ multifunctional ahụ ule ugbo ala si ORICH Medical Device site ụkpụrụ nke na-ahọpụta ndị na-kasị mma nke kacha mma.
E nwere ọtụtụ ugwu mgbe obere ala Luanchuan. "Ụmụ nwoke na-eje ije ala ugwu, ụmụ agbọghọ ịlụ di na nwunye si n'ugwu, na agadi na-jidere na ugwu” bụ ezi nkọwa nke ndụ na Luanchuan. Ebe a, ọgwụ ọrụ na-egbochi n'ihi arọ ugwu ụzọ. Karịsịa ndị na-enweghị akwụ okenye, ọ bụ ike na-adọ ọgwụgwọ na ihe omume nke ihe mberede. Ya mere, na mgbochi ọgwụ dị mkpa karịsịa. Na naanị oge mbụ nchọpụta na n'oge nchoputa, nwere ike n'oge ọgwụgwọ na n'oge mgbake ime
na 2017, Luanchuan Government emejuputa n'ezi ịda ogbenye mbelata na ọgwụ na-erite uru na oru ngo na-enye free ahụ ule maka ndị agadi ndị na-elekọta 60 na ogbenye obodo. Ugwu bụ ihe na-egbochi ha merie.
Olee t ime ka anụ ahụ nnyocha center n'ugwu?
A mobile ọgwụ ụgbọala bụ azịza.
ORICH Medical Deviceis a ọkachamara emeputa nke mobile ọgwụ ugbo ala na ọgwụ na redioaktivu achọpụta ọrịa ngwá, na na ụlọ ọrụ dị na China na oji ukwuu Ịhazi synchronous mmepụta na ubi nke radieshon na mobile medicaltreatment. Ọzọkwa, ya nwere a zuru mobile ọgwụ ngwọta. Anyị bụ ndị maara nke ọma na "customization” bụ mkpụrụ obi nke mobile ọgwụ ugbo ala. Na ORICH Medical Device, dịghị abụọ mobile ọgwụ ugbo ala na-kpọmkwem otu ihe ahụ. Ọrụ anyị na-amalite site mbụ oge oku.
Dabere na nke a plan, 16 eme ule ndị dị otú ahụ dị ka X-ray film, ọbara na-eme, B ultrasound, ngwá, etc. ike ga-agwụ agwụ n'ime ụgbọala na otu oge.
Na mgbakwunye, dabeere na mkpa n'ezie nke Luanchuan ọgwụ uru oru ngo, anyị tinye ndị na-esonụ ọkachamara usoro maka Luanchuan ọgwụ ụgbọala:
Protectiveroomsin ọkachamara radieshon ebe
Na echiche nke uko-oge na arọ-oru ọgwụ uru oru ngo, na-echebe jikoro nke ọgwụ na ahụ ike na-arụ ọrụ na-e. Na integrated imewe nke ígwè ọkpụkpụ na aru kpuchie na nakweere maka radieshon ebe n'ụzọ dị irè-gbochie ray radieshon.
Interior gburugburu ebe obibi njikarịcha usoro
N'oge Luanchuan ọgwụ uru oru ngo, anya nke ukwuu nke ndị agadi ọgwụ Examiners, ahụ ike na ugbo ala na-onwem na ime gburugburu ebe obibi njikarịcha usoro n'ụzọ dị irè-ọcha, sterilaiz, dehumidify, jụụ, ma ọ bụ ikpo ikuku, ma hụ na nke ọhụrụ ikuku na ụgbọala n'okpuru ọnọdụ nke nnukwu ìgwè mmadụ eruba.
Ọgụgụ isi onwe-agbanwe elu-voltaji ike ọkọnọ usoro
Na echiche nke mgbagwoju na njọ nke ike ọkọnọ n'ime ime obodo ebe, na ugbo ala na-onwem na onye nwere ọgụgụ isi onwe-agbanwe elu-voltaji ike ọkọnọ usoro, nke bụ nanị dakọtara na 380V ulo oru ike na 220V obodo ike, ma ana achi achi na ahụ ike na ngwaọrụ na ọgwụ na ahụ ike ugbo ala nwere ike na-arụ ọrụ ọma n'okpuru oghom ọnọdụ ndị dị otú ahụ dị ka n'elu-elu, n'elu-ala na-ejighị n'aka na ọnọdụ.
Intelligentvideocloud n'elu ikpo okwu
Dị iche iche na ọgwụ na ígwé ojii ọrụ, dị ka ígwé ojii nchoputa, ígwé ojii film, ojii nchekwa, ígwé ojii ntinye akwụkwọ, na igwe-oji alo, etc. Na-nyere ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ njikọ dị n'etiti ndị ọrịa, ụlọ ọgwụ, na ndị ọkachamara.
na July 2017, pụrụ iche ugbo ala nke Luanchuan ike nnyocha e eze nye.
Medical ụgbọala handoverceremonybetween Luanchuan na ORICH Medical Device
Mr. nie, na Director of Health na Family Planning Commission, MrMrLi, na President of Luanchuan People \_ 's Hospital, na Mr. Ding, onyeisi oche nke Luanchuan Traditional Hospital gara handover ememe
Interior ọtọ ebe ORICH multifunctional ike ule ụgbọala
Luanchuan nyekwara RMB 10.3 nde enye free ahụ ule n'ihi na ihe karịrị 50,000 ndị agadi ndị agadi n'elu 60 na ogbenye obodo. The abụọ ọgwụ ugbo ala na-eji ịrụ free ahụ ule n'ihi na ihe karịrị 40,000 ndị agadi ndị na, nke na-enweta ezi na-agụ site na niile circles.Xinhua News Agency nanị kọọrọ ya na n'ihu peeji nke ya Xinhua Daily Telegraph.
Free Medical Vehicle draịva n'ime Small Village
ORICH ọgwụ ụgbọala Huangbai Village, Miaozi Town, Luanchuan County
X-ray nnyocha na ọgwụ na ahụ ike ụgbọala
Ultrasound nnyocha na ọgwụ na ahụ ike ụgbọala
ECG nnyocha na ọgwụ na ahụ ike ụgbọala
Ọbara mgbali n'ihe maka obodo
Blood nnyocha maka obodo
Rụtụ aka na Number nke National Medical na Health Oru na Ọgwụgwụ nke May 2017 enyere site na Statistical Ozi Center nke National Health na Family Planning Commission, site na njedebe nke May 2017, ọnụ ọgụgụ nke ndị na nkà ọgwụ na ahụ ike oru gburugburu mba ruru 988,000. However, na ụfọdụ ndị dịpụrụ adịpụ, ọgwụ na ahụ ike ọrụ ka bụ ndị na-achọghị ka. The ala ka nyekwara ọtụtụ ịzụta ngwaọrụ ahụike. N'ọtụtụ ebe, na-asị na-larịị n'ụlọ ọgwụ e onwem na dị icOtú ọ dị elu-ọgwụgwụ ngwaọrụ ahụike, dị ka CT, NMR na MBI. However, ruru ka ọtụtụ mgbagwoju anya ihe ndị dị ka okporo ụzọ, ọtụtụ ndị na-na isi larịị nwere enweghị ohere ahụ ike na ọrụ. The ọgwụ oru obula mkpa a ezi ụzọ dozie agagharị nsogbu nke ọgwụ na ahụ ike ngwaike ego, otú ahụ ka mobile ọgwụ ugbo ala na ihe ha chọrọ.
The isi uru nke ọgwụ ọrụ bụ na CT bụ 128 ahịrị ma ọ bụ NMR bụ 3T, ma nlekọta bụ na gị n'akụkụ mgbe ị kwesịrị ya.
ORICH Medical Device bụ njikere ịrụ ọrụ na ndị ọzọ ike oru ụgbọala ORICH ọgwụ ụgbọala n'akụkụ ọ bụla ebe ọ dị mkpa.
LAGHACHI Ọ dịghị onye
OSOTEOlee otú Long Ọ Seven Years?
Tinye: No.16 Cuiming Road, YAT-sen Scientific Industrial Park, TEDA, Tianjin, China, 301726
Orich Medical Equipment(Tianjin) Co., Ltd © 2019 Ikike niile echekwabara